बाइबलका कथाहरू: यूसुफलाई दाइहरूले घृणा गर्छन् - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यो केटालाई हेर त। बिचरा, ऊ कत्ति दुःखी देखिन्छ। ऊ यूसुफ हो। ऊ किन दुःखी भएको होला, के तिमीलाई थाह छ? दाइहरूले उसलाई मिश्र जान लागेका मान्छेहरूको हातमा बेचिदिएकोले। अब ऊ त्यहाँ दास बन्नु पर्नेछ। यूसुफका सौतेनी दाइहरूले किन यस्तो नराम्रो काम गरेका होलान्? किनभने उनीहरू यूसुफको डाह गर्थे।
एकचोटि यूसुफले दुइटा सपना देखेको थियो। दुइटै सपनामा यूसुफले आफ्ना दाइहरूले उसलाई ढोगेको देखेको थियो। यूसुफले आफ्ना दाइहरूलाई सपना बताएपछि उनीहरूले झन् घृणा गर्न थाले।
ठीक त्यसैबेला केही इश्माएली यात्रीहरू त्यहाँबाट गइरहेका हुन्छन्। यहूदा आफ्ना सौतेनी दाजुभाइलाई यसो भन्छ: ‘बरु हामी यूसुफलाई यही इश्माएलीहरूको हातमा बेचिदिउँ।’ र उनीहरू त्यसै गर्छन्। उनीहरू २० टुक्रा चाँदीमा यूसुफलाई बेच्छन्। यूसुफका दाइहरू कत्ति निष्ठुरी हगि?
तर अब बुबाले यूसुफलाई खोज्नुभयो भने के गर्ने? यूसुफका दाइहरू सोच्न थाल्छन्। त्यसपछि, उनीहरूले एउटा बाख्रा मारेर त्यसको रगतमा यूसुफको सुन्दर कोट दुई-तीन खेप चोपल्छन्। अनि त्यो कोट घरमा लगेर बुबालाई देखाउँछन्: ‘हामीले यो कोट भेट्टायौं। हेर्नुहोस् त, कतै यूसुफको पो हो कि?’
त्यो कोट यूसुफकै हो भनेर याकूबले चिनिहाल्छ। ऊ यसो भन्दै रुन्छ: ‘पक्कै पनि जंगली जनावरले यूसुफलाई माऱ्यो होला।’ वास्तवमा यूसुफका दाइहरू पनि आफ्नो बुबाले त्यस्तै सोचेको चाहन्थे। याकूब धेरै अफसोस गर्छ। ऊ धेरै दिनसम्म रोइरहन्छ। तर यूसुफ मरेको छैन। उसलाई लगेको ठाउँमा के-के हुन्छ, हामी अर्को कथा पढौं है।
यूसुफका दाइहरू किन उनीसित डाह गर्थे अनि उनीहरूले के गरे?
यूसुफका दाइहरू उसलाई के गर्न चाहन्छन् तर रूबेन के भन्छ?
इश्माएली व्यापारीहरू आइपुगेपछि के हुन्छ?
यूसुफको बुबाले यूसुफको मृत्यु भएछ भनेर ठानून् भनेर उसका दाइहरू के गर्छन्?
उत्पत्ति ३७:१-३५ पढ्नुहोस्।
गलत कार्यहरूबारे मण्डलीलाई रिपोर्ट गरेर मसीहीहरूले कसरी यूसुफको उदाहरण अनुकरण गर्न सक्छन्? (उत्प. ३७:२; लेवी ५:१; १ कोरि. १:११)
कुन कुराले यूसुफका दाइहरूलाई ऊसित कपटी व्यवहार गर्न डोऱ्यायो? (उत्प. ३७:११, १८; हितो. २७:४; याकू. ३:१४-१६)
याकूबले छोरा मरेको खबर पाएपछि गरेको कुन कुरा शोकको स्वाभाविक भाग हो? (उत्प. ३७:३५)